Terra & Cal kumbindi weMoura
Ukuhlala ixesha elide okanye ukubaleka ngempelaveki, iCasa Terra kunye neCal yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla eMoura kwaye ufumane lo mmandla. Sinokukunceda kulo msebenzi ngokwenza amalungiselelo okuhamba, ukukhwela ibhayisekile, imoto, iphenyane okanye uhambo ngesikhephe.
Ifakwe kumbindi wembali weMoura, eyakhiwe ngamatye, izitena kunye nomhlaba onqanyuliweyo ukusuka kwiXVIII-XIX yeenkulungwane, iCasa TERRA & CAL ifakwe kumgangatho wokuqala malunga ne80m2 yendawo yokuhlala, inxibelelana nesitrato ngezinyuko. Ibandakanya indawo ephakamileyo emalunga ne-20m2.
Kwi-façade kumi ifestile yebalcony enentsimbi ekhandiweyo yentsimbi eqhelekileyo yommandla, ibonelela ngeembono ezinomdla zesitrato kunye nezakhiwo ezininzi eziphawulekayo ezingqongileyo.
Amagumbi, axhotyiswe ngefenitshala esebenzayo, abandakanya igumbi lokuhlala, amagumbi amabini okulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela.
Iindonga zesakhiwo, ipeyintiweyo esekwe kwikalika, eneepigments ezingaphiliyo (i-ocher kunye ne-ultramarine eluhlaza okwesibhakabhaka) kumagumbi amabini, zenziwe ngamatye kunye nomhlaba we-rammed kunye nengaphakathi lezitena, izixhobo kunye nobuchule bokwakha ummeli we-architecture yendabuko yase-Alentejo.
Ukongeza kwi-vault yendabuko yegumbi lokuhlala, uphahla lufakwe ngamaplanga kumagumbi aseleyo. Emgangathweni, iithayile zakudala zixutywe kwigumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala aneemosaic zanamhlanje kuyo yonke indlu, ngaphandle kwendawo ephezulu, enemigangatho eyenziwe ngamaplanga.
I-Casa TERRA kunye ne-CAL ikwasisiseko esihle kakhulu sokufumanisa inkcubeko kunye nelifa lemveli kuyo yonke indawo yonxweme lwasekhohlo lomlambo waseGuadiana, kuquka neendawo ezisecaleni komlambo zeAlqueva kunye nePedrógão reservoirs.
KwiCasa TERRA kunye neCAL uya kuziva usekhaya.
20 IZIZATHU EZILUNGILEYO ZOKUndwendwela i-MOURA, HLALA NGAPHEZU KWEMINI NYE OKANYE, NGUBANI OWAZIYO, NGOKUPHAKADE *
1. Indawo: kumzantsi-mpuma wePortugal, kunxweme olusekhohlo lomlambo iGuadiana, neSpeyin kanye apho.
2. Imozulu: imozulu epholileyo, eneempawu zeMeditera kunye nelizwekazi, kunye neentsuku ezingama-300 zokukhanya kwelanga ngonyaka.
3. Abantu: ukwamkela kunye nobuhlobo, kuya kukwenza uzive usekhaya.
4. Izikhumbuzo: ukusuka kwinqaba ukuya kwindawo yaseQuartéis, ukusuka kwi-convent yaseCarmo ukuya kwintendelezo yaseRolins, ukusuka kwicawa ye-S. Pedro ukuya kwi-convent yase-S. Francisco, kwixesha elidlulileyo ngamehlo ekamva.
5. Iziko lembali: lizele ubomi kwaye ligcinwe, liyanda ukusuka kwinqaba nakwixesha lembali.
6. Ilifa le-Arab-Islamic: libonakala kwinqaba ye-Almohad, kwindawo yaseMouraria, kwi-architecture, kwi-gastronomy, ekulinyweni kwemithi yomnquma kunye neoli yeoli, kwi-polyphonic yokucula i-Alentejo (canto), kwintsomi yaseSalúquia. nkosazana.
7. Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa: unyaka wonke, kodwa ngakumbi ngobusuku obushushu behlobo xa ufuna nje ukuphuma esitratweni kunye nabahlobo.
8. I-Gastronomy: ukusuka kwioli yeoli ukuya kwiwayini, ukusuka kwisonka ukuya kwishizi, ukusuka kubusi ukuya kwi-sausage, ukusuka kwi-"açordas" ukuya kwi-stew of grains, ukusuka kwi-broths ukuya kwi "migas", ukusuka kwiisuphu ukuya ekuzingeleni, ukusuka kwiilekese ezithandwayo ukuya kwii-conventual.
9. Imiboniso kunye nemibhiyozo: ethandwayo, apho isithethe kunye nentsha, inkolo kunye nenhlamba, ihamba kunye ekubhiyozeleni ubomi.
10. Amanzi: akhoyo kwi-Alqueva kunye ne-Pedrógão reservoirs, umlambo i-Ardila, i-spouts ezintathu ze-Moura, kwi-brand eyaziwayo "Água Castello".
11. Amadama e-Alqueva nasePedrógão: alungele ukuloba kwezemidlalo, ukuhamba ngephenyane okanye ukuhamba ngesikhephe ngeemoto, kodwa nabahambi ngeenyawo, iibhayisekile neemoto, kumda ongaphezulu kwe-1,100 leekhilomitha.
12. Umlambo iArdila: ohamba malunga neekhilomitha ezili-180 phakathi kweSpeyin nePortugal uze ukhuphe amanzi eGuadiana ngokujonga iMoura.
13. Uluhlu lweenduli zaseAdiça: indawo enezityalo nezilwanyana ezininzi, eneentlobo ezinqabileyo zaseYurophu zezilwanyana kunye nezityalo.
14. Contenda: ilitye elinqabileyo lesithsaba sedolophu yaseMoura, yeyona ndawo inkulu yokugcina amaxhama ePortugal kunye nendawo ezenzeka kuyo izilwanyana ezisengozini njengexhalanga elimnyama, ikati yasendle kunye nelynx yaseIberia.
15. Ukubukela iintaka: ngokukodwa imihlambi yeekhranes ongayifumana kwi-county yaseMoura, indawo enkulu yasebusika kwilizwe lethu, ukuvuyisa abathandi balo msebenzi kunye nezilwanyana zasendle.
16. Imisebenzi yemihlaba kunye neyasemaphandleni: ukuzihlaziya kwisingqi samaxesha onyaka: "i-alqueivar" yamasimi, incasa yewayini entsha, ukuvunwa kweminquma, ukwenziwa kwetshizi, ukucheba iigusha, inkosana yobusi, ukuhombisa. ye-oki yesikhokho.
17. Ioyile yomnquma yaseMoura: yaqinisekiswa ngoKutyunjwa kweMvelaphi eKhuselweyo, udumo lwakhe lwezinyanya lwavelisa intetho eyaziwayo ethi "ilungile njengeoli yomnquma kaMoura".
18. Izitiya zemifuno: i-oasis ekungeneni kwedolophu, bobunye ubuso be-agrarian patrimony yommandla kunye neMeditera, ngokuchaseneyo neenkqubo zokulima ezomileyo.
19. Isibhakabhaka sasebusuku: enye yezona ndawo zibalaseleyo zaseYurophu zokuziqhelanisa neenkwenkwezi, ezidibanisa i-Dark Sky Reserve Alqueva.
20. Ixesha kunye nendawo ngaphandle kwemida, njengoko kuphela kwi-Alentejo.
* ukuba kunokwenzeka ukuba usele amanzi eBica de Santa Comba.